~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: ကျမနှင့် ဒီဇင်ဘာ
~~ ကျမနှင့် ပေါက်တတ်ကရ(၁) နဲ့
~~ ကျမနှင့် ပေါက်တတ်ကရ(၂) ဆိုပြီး နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
(၁)ကတော့ ကြက်ဆီဗူးအကြောင်းရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၂)ကတော့ ရုံးသော့ပိတ်သွားတဲ့အကြောင်း ရေးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းပို့(စ်)တွေမှာတော့ ပေါက်ကရနောက်မှာ နံပါတ်တပ်ပြီး ရေးမဲ့အစား ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ရေးတော့မယ်စဉ်းစားနေတုန်း ... ဒီတလော.. စိတ်သိပ်မကြည်တာကြောင့် "ကျမနဲ့ဒီဇင်ဘာ" ဆိုတဲ့ပို့(စ်)ကို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ဖြေဖို့ ရေးချင်လာပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ ...ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလတွေမှာ.. စလုံးက X'Mas Fun, New Year Fun ဆိုတာတွေဟာ ကျမနဲ့ သိပ်.. မသက်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းပိတ်ထားချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ... ( တစ်ခါတစ်ရံမှာ Pay ပိုရလို့၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်အရှေ့ က senior part-timer များနဲ့ full-timerများက လူလည်ကျပြီးဆွဲထားတဲ့ work shift ကို လုပ်ရလို့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အတူ ...) အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံစုနေခဲ့ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီးမတ်တပ်ရပ် အလုပ်လုပ်ပြီးလို့ ညမိုးချုပ် .... အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်တဲ့အခါ... ပျော်နေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ကြည့်ပြီး ... အိမ်ကို အမြန်ပြန်ရောက်ရေးကိုသာ တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ ပျော်ဖို့ဆိုတာထက် ကိုယ့်အိမ်ပြန်ပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ရေချိုး... ကိုယ့် အခန်းလေးထဲက အိပ်ရာပေါ်မှာ ကျောဆန့်ဖို့ကိုသာ.. ပိုလုိုချင်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ .. ကျောင်းပြီးပြီး တကယ့်အလုပ်ခွင် ဝင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့.. ကိုယ့်ကို အလုပ်က ခွင့်ရက်ရှည်ပေးတဲ့အချိန်ဟာ ဒီဇင်ဘာဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ပြန်ချိန် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဲ့ဒီ ပျော်စရာတွေကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ကိုယ့်ကိုအမှန်တကယ် နွေးထွေးမှုပေးတဲ့ မိသားစုဆီကို ပြန်ဖို့ကိုသာ တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်တော့ ညီမ..မင်္ဂလာဆောင်ရှိတာကြောင့် .. ဂျူလိုင်လမှာတစ်ကြိမ်.. နိုဝင်ဘာလမှာတစ်ကြိမ် ခွင့်ယူခဲ့တာမို့ ဒီဇင်ဘာမှာ ခွင့်တစ်ရက်မှ မကျန်တော့ပါဘူး။ ဆေးခွင့်တွေအများကြီးကျန်ပေမဲ့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ နေမကောင်းဘဲ MC မယူချင်သူမို့၊ မယူခဲ့သူမို့.. တရုံးလုံး ခွင့်ယူနေချိန်မှာ ရုံးစောင့်လုပ်နေရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ... ပိတ်ရက်တွေကြားမှာ မနက်ဖြန်တစ်ရက်က ကတ်သီးကတ်သတ်နဲ့ ရုံးဖွင့်နေပါတယ်။ မနက်ဖြန်တစ်ရက်လည်း ... စိတ်မပါဘဲ... အလုပ်သွားလုပ်ရပါဦးမယ်။
ပိတ်ရက်တွေမှာ လျှောက်လည်မယ်ဆိုတော့လည်း အားလုံးက ကိုယ့်ကိတ်စနဲ့ကိုယ် အလုပ်ရှုပ်နေကြလို့ အိမ်မှာ အခန်းပိတ်ပြီးနေနေရပါတယ်။
ဒီလို holiday blues တွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ရာ ဒီနေ့တော့ ... wet market ကဝယ်လာတဲ့ ငှက်ပျောအူမနုနုလေးရယ်၊ ငါးဖယ်အစားထိုးပြီး ထည့်ထားတဲ့ ငါးလုံးတွေရယ်ကို ပင်ပျိုရွက်နု ready made မုန့်ဟင်းခါး ထုတ်နဲ့အတူရောချက်ပြီး...အိုးကြက်ဥ၊ city hall, penesula plaza မှာရှိတဲ့ မြန်မာဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ပဲကြော်၊ ဒီမနက် food courtကဝယ်လာတဲ့ အီကြားကွေး တို့နဲ့အတူ.. တနေကုန် တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ထိုင်စားနေပါတယ်။ အစားကောင်းကောင်းစားရတဲ့အပြင် ... ဒီစာကိုရေးနေတာမို့ စိတ်ဖြေသလို ဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ စိတ်အတော်ပြေသွားပါပြီ။
လာမဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာလည်း ဘယ်မှမသွားပဲ ခရစ်(စ်)မတ်နေ့မှာ ထောပတ်ထမင်းရယ်၊ (မဆလာနဲ့ ) ကြက်သားဆီပြန်လေးရယ်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်ကိုချက်ပြီး ကျောက်ပွင့်ဆိမ့်ဆိမ့်လေး သုတ်စားပါဦးမယ်။
အားလုံးပဲ "Merry X'Mas and Happy New Year"ပါ။
ဒီ holidayမှာ... ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။း)
~~~May the coming year bring you love, wealth, health and success~~~
မှတ်ချက်။ ။ စိတ်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာတော့.. ဒီဇင်ဘာရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ မြင်မိလာပါတယ်။ နောက်မှပဲ ကောင်းတာတွေကို ရေးချတော့မယ်။ :P
23/Dec/2012; 9:06AM; GMT+8
စံပယ်ချို December 24, 2012 1:20 AM
"Merry X'Mas and Happy New Year"
witch83 December 24, 2012 2:51 PM
Thank you so much sis, same to you.. happy holidays. X'Mas Eve wasn't that bad as I had expected. My GM dropped by and gave me X'Mas present and allow me to go back around 12 pm :))))
မိုးနတ်ကြယ်စင် December 25, 2012 7:27 PM
ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်နဲ့ ကျောက်ပွင့်သုပ်လေးတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျို့..
witch83 December 26, 2012 9:40 AM
ချဉ်ပေါင်ဟင်းနဲ့ အသုပ်က မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး sis ရယ်.. ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်းဘဲ ချက်ဖြစ်တာ။ :D
၂၀၁၂ မှသည် ၂၀၁၃ဆီသို့
We did not try to prejudice SMRT drivers' cases: M...
ရေးမိရေးရာ ( ခုတလော စိတ်ထဲ ခိုးလို့ခုလုဖြစ်နေသော အ...
Pooja Chopraနှင့် သူမ၏မိခင်